Uyikhuphelela njani i-LinkedIn ye-Mobile App? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyikhuphelela njani i-app ye-LinkedIn mobile?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 405
I-LinkedIn yenza ukuba ifumaneke basebenzise iApp entsha yokuqhagamshela kule nethiwekhi yoluntu ngamaxesha onke. Ukufikelela kubasebenzisi abaninzi, le sicelo seselfowuni iyafumaneka kuzo zonke izixhobo ezineenkqubo zokusebenza ze-Android okanye ze-iOS.
Ukuba unesixhobo se-Android okanye i-Apple, kule posi awuyi kubona kuphela indlela yokufaka esi sicelo, kodwa kunye nezibonelelo ezibonelelayo.
Amanyathelo okukhuphela i-LinkedIn App kwi-Android
Ukukhuphela usetyenziso lweselfowuni kwisixhobo esinenkqubo yokusebenza ye-Android kulula kakhulu ngenxa yendlela yayo enobuchule. Kuya kuthathelwa ingqalelo kuphela ukuba isixhobo seApple seApple ubuncinci Inguqulelo 5.0 kunye no-121 MB yendawo yokugcina.
Ngale nto engqondweni, kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo ukukhuphela kunye nokufaka I-LinkedIn esuka kwiGoogle Play Store:
Vula usetyenziso lweVenkile yeGoogle Play kwi Idivaysi ye-Android.
Kwibar yokukhangela bhala "LinkedIn".
Kwisiphumo sokukhangela cinezela iqhosha eliluhlaza elibhalwe "Faka" elisekunene kwegama leApp.
Emva koko, Ukukhuphela usetyenziso lwe-LinkedIn kuya kuqala Kwaye xa ibha yenkqubela phambili ifikelela kwi-100% ufakelo luza kuqala ngokuzenzekelayo.
Amanyathelo okukhuphela i-LinkedIn App kwi-iOS
Los Izixhobo ze-Apple zahluke kancinane kwiikhompyuter ezinenkqubo yokusebenza ye-Android. Lo mahluko ungaphaya koyilo lwangaphandle, njengoko isoftware yahlukile. Kungenxa yoko le nto ukufakwa kwe-LinkedIn kunamanyathelo ahlukeneyo kwaye nganye kuzo iya kuchazwa ngezantsi:
Qalisa Ivenkile yeeVenkile nakwesiphi na isixhobo se-iOS.
Khetha "Khangela" kwaye ubhale igama "Ikhonkco".
Ngoku, uya kubona i-LinkedIn App ye-mobile kwaye ecaleni kwayo iqhosha elithi "Fumana" ekufuneka ucinezele.
Ke khetha iqhosha elithi "Faka" eliza kuvela kwiscreen.
Emva koko, ukukhuphela kunye nokufakwa kwe-LinkedIn Mobile App kuya kuqala ngokuzenzekelayo kwisixhobo sakho se-iOS. Ukuba isixhobo asikuvumeli ukufakwa kweApp, oko kuthetha ukuba ayihambelani nohlobo lwe-iOS. IpheUkufaka i-LinkedIn kwizixhobo ze-Apple, kufuneka ubuncinci be-iOS 11.
Izinto eziluncedo ze-LinkedIn App
I-App ye-LinkedIn inokukhuphela ngaphezulu kwe-500 yezigidi kwiGoogle Play Store App kunye inenqanaba elihle leenkwenkwezi ezi-4,2. Oku kungenxa yezibonelelo zayo ezintle ezenze ukuba abasebenzisi abaninzi basebenzise usetyenziso lwayo lweselfowuni yonke imihla.
Ezona zibonelelo zibalaseleyo zibonelelwa yile App zezi zilandelayo:
Ivumela ukufikelela kwiprofayile yakho ye-LinkedIn ngexesha lokwenyani kwaye naphi na apho ukhoyo.
Fumana izilumkiso ngeencoko ezisebenzayo, iindaba okanye uhlaziyo oluvela kubahlobo bakho.
Khawuleza ufumane abahlobo bakho emsebenzini okanye kwizifundo ukubongeza kwinethiwekhi yakho yobungcali.
Isikena sekhowudi ye-QR ukongeza ngokukhawuleza izihlobo zakho kwinethiwekhi yakho yobungcali.
Enkosi ngezi zibonelelo, Ukukhuphela i-LinkedIn App yenye yeendlela ezilungileyo Oko kunokwenziwa ngabasebenzisi bayo.
1 Amanyathelo okukhuphela i-LinkedIn App kwi-Android
2 Amanyathelo okukhuphela i-LinkedIn App kwi-iOS
2.1 Izinto eziluncedo ze-LinkedIn App
Ndingayilanda njani i-Facebook?
Uyikhuphela njani ividiyo kwiTwitch?